“Univarsitiin Adaamaa ammaas tarkaanfii farra Oromoo fudhatuu ittuma fufee jira. Kanneen keeyssaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Univarsitiin Adaamaa ammaas tarkaanfii farra Oromoo fudhatuu ittuma fufee jira. Kanneen keeyssaa
“Univarsitiin Adaamaa ammaas tarkaanfii farra Oromoo fudhatuu ittuma fufee jira. Kanneen keeyssaa
1. Barattuu Daraartuu Abbayyaa (waggaa 4ffaa ka barattu) bakka ishiin raftee jirtutti halkan poolisii federaalaa itti ergan. Poolisoonni kun dhiira. Doormii dhalaa seenanii bakka muchiyyoon raftutti dormii cabsanii itti ol seenan. Achii booda tumanii gudeedanii irraa bayani. San booda intalti koomaa keeyssa galtee turte. Ammaan tana Daraartuun hospitaala jeneraala Adaamaatti oldhaanamaa jirti. Namni dhimma kana ifatti baase dubbate haga ammaatti hin garre. Dhalaan biraas akka karaa irratti poolisoota kanaan gudeedamtes dhagayamee jira.
2. Ammaan dura univarsitichi barattoota torba ari’ee kan ture yoo ta’u, dhiibbaatiin barnootatti deebiseera. Ammaas dheengadda barattoota Oromoo biroo torba poolisoonni ukkaamsanii fudhataanii jiran. Poolisoonni halkaniin doormiitti itti ol dachaa’anii meeshaa isaanii eega sakatta’anii booda kompiitara isanii wajjii fudhatanii deeman. Kanneen keessa barataa Abdataa Jamaal, Caalaa, Lammii, Gurree kan jedhaman muraasa.
3. Wanni yaadddessa guddoon eenyu akka univarsiticha bulchaa jirullee hin beeynu. Poolisiin federaalaa guyya guyyaan barataa dararaa oola. Dormii seenanii gadi barataa gadi baasu daree qabaatanis dhiisanis daree seenaa ta’aa jedhu. Haraas nama gochaa oolu. Wanna barbaadan dalagu. Kilaashiif boombii baatanii dareetti ol seenu waan ajaayibaa. Barsiisotaaf hojjettootalle ni abaaru ni shororkeeysu.
4. Warri bakka bu’aa partiilee ADWUI afran illee akkanumatti barataa doorsisaa oolu. Abbaa barbaadan tumsiisu hiisisu. Warri OPDO moraa keeyssaas ofiifuu hin haaromne akkanumatti barataa Oromoottii diina tayanii qabsiisu
5. Bulchiinsi univarsitichaas waan hamtuu dalaguutti jira. Barattootatti poolisii federaalaa dhibbaa ol itti diranii ofiif boqotu. Sagalee barataa ukkamsaa jiru. Dhimmi barattoota gudeedamanii, tumamaniif hidhamaniifaan akka ifa hin bane dhorkaa jiru.
Kanaaf maatiin barattootaa haala ilmaan isaanii keeyssa jiran qaceellootti gaafatanii hordofuu qaban.”
Breaking News : Qondaaltonni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ragaa
Oromoon kana booda seeratu biyya jira jedhee mootummaa shorkeessituu Wayyanee irraa waa eeguu dhiisee ofumaaf walgummeessee diina kamiyyuu (kan dhalootan Oromo ta’e dabalatee) irrati TARKAANFII CULULUQAA fi ISA DHUMAA (AJEESEESANII DU’UU) fudhatee yoo barbaachise wareegamuu qaba malee gadaan diinni keenya kanaa fi kana nugodhe jennee booyaa himmannu darbee jira.